बिना मास्क सुपरमार्गेट प्रवेश गर्न नदिइएपछि यी महिलाले जे गरिन् …. - Nepali in Australia
बिना मास्क सुपरमार्गेट प्रवेश गर्न नदिइएपछि यी महिलाले जे गरिन् ….
March 2, 2021 autherLeaveaComment on बिना मास्क सुपरमार्गेट प्रवेश गर्न नदिइएपछि यी महिलाले जे गरिन् ….
बिना मास्क सुपरमार्गेटमा सामान किन्न गएकी एक महिलालाई बिना मास्क प्रवेश गर्न नदिइएपछि उनले आफ्नो भित्रै व स्त्र फु का ले र मास्कको रुपमा लगाएकी छिन्। ती महिलाले भि त्रै व स्त्र खोल्दै गरेको र त्यसलाई मास्कको रुपमा लगाएको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ ।
द सनको रिपोर्टअनुसार यो अनौठो घटना दक्षिण अफ्रिकाको पिक एन पे सुपरमार्केटमा क्यामेरामा रेकर्ड भएको थियो । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि यसले तरंग ल्याएको छ।
द सनको रिपोर्टअनुसार ती महिलालाई सुरक्षा गार्डले अनुहार छोप्न आग्रह गरेका थिए तर महिलाले आफूसँग मास्क नभएको दावी गरेकी छिन् । महिलालाई पसलबाट बाहिर निकालिने चे ता वनी दिइएपछि उनले आफ्नो कपडाभित्र हात हालेर भित्री वस्त्र फुकालेर अस्थायी मास्कको रुपमा लगाएको भिडियो फुटेजमा देखिन्छ।
यो क्लिप अनलाइनमा भाइरल भएसँगै यसले आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । सामाजिक संजालमा महिलाको आलोचना भइरहेको छ । गएको डिसेम्बर महिनामा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले सार्वजनिक ठाउँमा मास्क नलगाउनु अपराध हो भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए।उनले भनेका थिए –‘मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प’क्राउ गरी कार वाही गर्न सकिन्छ । दो षी ठ हर भए उनीहरूलाई ज रिवाना वा छ महिनाभन्दा बढी कै द वा दुवै स जाय हुनेछ।’
गाएक तथा नायक प्रसान्त तामाङ्गको आमाको असमाहिक निधन
April 27, 2021 April 27, 2021 auther
June 26, 2021 June 26, 2021 auther